ချောင်းအလင်းထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - တရုတ်ချောင်းအလင်းစက်ရုံ
LED အလင်းပြန်မှုအလင်း-Square ကို
၁။ ဗိသုကာအလင်းရောင်တွင်အလင်းတုသည်နေ့အလင်းရောင်သို့မဟုတ်သဘာဝအလင်းရောင်ကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ ၂။ နေ့အလင်းရောင်ကိုအတုအလင်းရောင်ဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ အလင်းရောင်တုသည်နေ့အလင်းရောင်မရှိခြင်းကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
LED driver အကြောင်း
LED driver LEDs များမိတ်ဆက်သည်အနုတ်လက္ခဏာအပူချိန်လက္ခဏာများပါ ၀ င်သောဝိသေသအာရုံခံ semiconductor ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လျှောက်လွှာတင်စဉ်အတွင်းတည်ငြိမ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
လူတို့သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀ က semiconductor ပစ္စည်းများသည်အလင်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်ဟူသောအခြေခံဗဟုသုတကိုနားလည်ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် General Electric ကုမ္ပဏီမှ Nick Holonyak Jr. သည်ပထမဆုံးမြင်သာသောအလင်းရောင်အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း LED နည်းပညာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနှုန်းဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် LED မီးလုံးများသည်ယခင်ကထက် ပိုမို၍ သဘာဝကျစွာကြည့်ကောင်းလာပြီးမီးရောင်များအတွက်စျေးနှုန်းများသည်တစ်စထက်တစ်စကျဆင်းလာသည်။
အသုံးများသော LED power supply
LED power supply အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းသည်အလွန်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေသောအရေးကြီးအချက်များထဲမှတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် LED power supply သည် ...
LED wall washer နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုသုံးခု ...
LED wall washer များနှင့် LED hard strip light များသည် linear light များဖြစ်သည်။ ၎င်းကို light industry တွင် linear lamps ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် LED Wall အဝတ်လျှော်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပြင်ပရှုခင်းများအတွက်အလင်းရောင်နှင့် hard hard strip အတွက်အသုံးပြုသည်။
LED strips တွေအကြောင်း
LED Reflector (2) ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
Reflector များအသုံးပြုခြင်း၏အတားအဆီးများနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးမည့်အားသာချက်များရှိသော်လည်းသင်၏ Home သို့မဟုတ်သင့်ရုံး၌ Reflector အသုံးပြုခြင်းအားနည်းချက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ...
LED Reflector တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း (1)
ယနေ့ခေတ်ဒီကမ္ဘာကြီးတွင်ရှင်သန်နေထိုင်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီး LED နည်းပညာဖြင့်ကောင်းချီးခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းသည် All-Powerful LED Reflectors ပုံစံဖြင့်အိမ်နှင့်ရုံးမီးပြောင်များသို့ရောက်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် befo ...
အိမ်သုံး LED မီးရောင် (2)
အခြေစိုက်စခန်း LED မီးများနှင့် Incandescent မီးလုံးများ၏အခြေခံသည်အမြဲတမ်းတူညီခြင်းမရှိကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ LED မီးများ ၀ ယ်သည့်အခါညီမျှသောမီးသီးများကိုသင်တပြေးညီဖယ်ထားပါ။ T နေ ...
အိမ်သုံး LED ရောင်ပြန်များ (1)
LED သည်အချိန်အတော်အတန်တည်ရှိသော်လည်းအိမ်မီးအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်မကြာသေးမီအချိန်အထိဖြစ်သည်။ လောင်ကျွမ်းခြင်းမီးသီးများနှစ်ပေါင်းများစွာစံဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ...
အိတ်ဆောင် Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Led Floodlight 30w , Tri-Proof Light Lighttip , Philips က 3030 Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, ထိုဥယျာဉ်ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း, ဦးဆောင် COB ရေလွှမ်းမိုးအလင်း,